I-Mexican Genealogy 101: Indlela yokulandelela umndeni wakho eMexico
IMexico Genealogy 101
Ukulandelela Umndeni Wakho eMexico
Ngenxa yamakhulu eminyaka yokugcinwa kwerekhodi ngokucophelela, iMexico inika ubutyebi becawa kunye neengxelo zomntu zomcwaningi wemveli kunye nomlando. Kwakhona lizwe lakwawo onke ama-10 aseMerika. Funda kabanzi malunga nelifa lakho laseMexico, kunye namanyathelo okulandelela umthi wakho waseMexico.
UMexico unomlando ocebileyo wabuyela kumaxesha amandulo. Iindawo ze-Archaeology ngeenxa zonke zelizwe zithetha ngemiphakathi yasendulo eqhubekayo kwiminyaka eyi-Meyidi kwiminyaka ngaphambi kokuba kufika abantu baseYurophu bokuqala, njenge-Olmec, becinga ngabanye ukuba yinkcubeko yenkcubeko yempucuko yaseMesoamerica, ababehlala malunga ne-1200 ukuya 800 BC, kunye namaMaya ePeninsula yaseYucatan aphumelele ukusuka malunga ne-250 BC ukuya ku-900 AD.
Ngethuba lekhulu le-15 leminyaka ama-Aztec ayenamandla, ahlala ebusweni, agcina ukulawula kulo mmandla kude anqotshwa ngo-1519 nguHernan Cortes kunye neqela lakhe labangaphezu kwe-900 abaphenyi baseSpeyin. Ebizwa ngokuthi "iNew Spain," intsimi yaza yalawulwa nguMlawuli waseSpain.
Ookumkani baseSpain bakhuthaza ukuhlolisiswa kwamazwe amatsha ngokunika abo bawunqobi ilungelo lokumisela indawo yokuhlala ngokutshintshana kweyesihlanu (i-quinto yangempela, isihlanu sobukhosi) nayiphi na ingcebo.
Ikholoni yaseNew yaseSpain yabuyela ngokukhawuleza imida yokuqala yolawulo lwama-Aztec, iquka yonke iMexico yaseMexico, kunye neCentral America (njengasezantsi kweCosta Rica), kunye neninzi yamanqanaba angasentla-ntshona eMelika, kuquka onke okanye iinxalenye zaseArizona, eCalifornia, eColorado, eNevada, eNew Mexico, eTexas, e-Utah nase-Wyoming.
AmaSpeyin aqhubeka elawula phezu kweMexico kude kube ngo-1821 xa i-Mexike ifumana isikhundla njengelizwe elizimeleyo.
Ngaloo xesha, ukufumaneka kwehlabathi elingabizi kakhulu kubangele abanye abafuduki baseSpeyin abafuna isimo sezentlalo esinikwe abanini-mhlaba ngabahlali baseSpain ngelo xesha. Abahlali abahlala ngokusisigxina banikezela iindidi zeentlalo ezihlukeneyo:
Iipeninsulars , okanye iqela elilawulayo, ngabantu abazalwa eSpain okanye ePortugal. Ukugcina umgca, abanye abantu bathumela abafazi babo eSpain ukuba bazalwe, ukuqinisekisa ukuba abantwana babo baphumelele kwiimeko "zasepeneni".
I-Criollos yayingabantu baseNtshonalanga abavela kwiNew Spain. Leli qela, ngenkxaso yama-mestizos kunye nezinye iiklasi ezisezantsi, eziqalise iminyaka eyi-11 yokuvukela ukufuna ukuzimela kuMexico ngo-1821, ekuphenduleni ukwandisa irhafu nemimiselo yiNkundla.
Iingxaki zazingabantu begazi elixutywe (ngokuqhelekileyo lisetyenziselwa ukuchonga i-Spanish / Indian ancestry) ababeka ngaphantsi kune-criollos kwi-hierarchy yaseNtanethi yentlalo. Abaninzi baseMexico namhlanje (abangaphezulu kwama-65%) behla kweli qela.
AmaNdiya angamaNdiya aseMexico. Ngaphambi kokuzimela kweMexico, ukusetyenziswa kwamanani amaninzi kwakusetyenziswa ngabantu baseSpain ukuchonga abantu base-Indiya, kuquka i-indio (isiNdiya), i-mestizo (isiqingatha saseNdiya / isiqingatha esimhlophe), i-zambo (isiqingatha-amaNdiya / isiqingatha saseAfrika) kunye ne-lobo (ezintathu- kwikota yeAfrika / enye kwikota yaseNdiya).
Ngelixa iMexico ilwamkele abanye abantu abafudukela kummandla walo, uninzi lwalo lwabahlali baseSpeyin, amaNdiya, okanye abahlali beSpeyin ne-Indian (mestizos). Abantu abamnyama nabase-Asiya bayinxalenye yabantu baseMexico.
Ukuqhuba uphando lwembali lwentsapho ephumelelayo eMexico, kufuneka uqale ukwazi igama ledolophu apho okhokho bakho bahlala khona, kunye negama le-municipio apho kwakukho idolophu.
Kwakhona kunceda ukuba uqhelane namagama ezixeko ezikufuphi kunye needolophini, njengoko okhokho bakho bebeye bashiya iirekhodi apho. Njengoko uphando lomnombo kumazwe amaninzi, le nyathelo ibalulekile. Amalungu entsapho angakwazi ukukunika le ngcaciso kodwa, ukuba akunjalo, zama amanyathelo achazwe kwi- Finding Place of Birth of your Ancestor of Immigrant .
I-Federal Republic yaseMexico yenziwe ngamazwe angama-32 kunye ne- Distrito Federal (isithili se-federal). Urhulumente ngamnye uyahlukana ngama- municipios (afana ne-US county), enokubandakanya imizi, idolophana kunye nemizana. Iirekhodi zomntu zigcinwa yi-municipio, zeziphi iingxelo zecawa ziya kufumaneka kwidolophu okanye kwidolophana.
Isinyathelo esilandelayo > Ukufumana ukuzalwa, iMitshato kunye nokufa eMexico
<< Abantu baseMexico naseJografi
Xa uphando ookhokho bakho eMexico, indawo efanelekileyo yokuqala iirekhodi zokuzalwa, umtshato nokufa.
Iirekhodi Zoluntu eMexico (1859 - ngoku)
Iirekhodi zobhaliso zaseMexico zirekhodi ezifunekayo karhulumente zokuzalwa ( nacimientos ), ukufa ( defunciones ) kunye nemitshato ( matrimonios ). Eyaziwa ngokuba yi- Registro Civil , ezo rekhodi zembambano ziyimithombo enhle kakhulu yamagama, imihla kunye neziganeko ezibalulekileyo kwipesenti enkulu yabemi abahlala eMexico ukususela ngo-1859.
Iirekhodi azizalisekanga, nangona kunjalo, njengoko abantu bebengayithobeli, kwaye ukubhaliswa kwabambalwa akuzange kugxininiswe eMexico kude kube ngo-1867.
Iirekhodi zobhaliso zobumbano eMexico, ngaphandle kwee-Guerrero ne-Oaxaca, zigcinwa kwizinga likaMasipala. Uninzi lwala maxwebhu oluntu lufakwe ngefayile nge-Library History Family, kwaye lunokuphandwa nge-Centre History History yakho. Imizobo yeDialog yaseMexico Ingxelo yokuBhaliswa koLuntu iqala ukufumaneka kwi-intanethi mahhala kwi-FamilySearch Record Search.
Unokufumana iikopi zobhaliso zobhaliso eMexico ngokubhalela kubhaliso lwabantu basekuhlaleni. Nangona kunjalo, iirekhodi zoluntu ezidala ziyakuthi zithunyelwe kumasipala okanye kwi-archive yombuso. Cela ukuba isicelo sakho sithunyelwe, mhlawumbi xa kwenzeka!
Iirekhodi zeCawa eMexico (1530 - ngoku)
Amaxwebhu okubhaptizwa, ukuqinisekiswa, umtshato, ukufa kunye nokungcwaba kugcinwe ngamapariti aseMexico iminyaka engama-500.
Ezi ngxelo zixhamle ngakumbi ekuphanduleni ookhokho ngaphambi kowe-1859, xa ubhaliso lwabasebenzi luqala ukusebenza, nangona banokunika ulwazi malunga neziganeko emva komhla ongenakufumaneka kwiirekhodi zomntu.
Icawa yamaRoma Katolika, eyayiseMexico ngowe-1527, yinkokeli enkulu eMexico.
Ukuphanda okhokho benu kwiirekhodi zaseMexico zecawa, kufuneka niqale ukwazi iparishi kunye nedolophu okanye idolophu yokuhlala. Ukuba ukhokho wakho wayehlala kwidolophu encinane okanye kwidolophana engenayo iparishi esekelwe, sebenzisa imephu ukuze ufumane iidolophu ezikufutshane kunye necawa okhokho bakho abaya kuyo. Ukuba ukhokho wakho wayehlala kwisixeko esikhulu esinamaqela amaninzi, iirekhodi zazo zingaphantsi kweparishi enye. Qalisa ukukhangela kwiparadesi apho ukhokho wakho ahlala khona, wandise uphando kwiipariti eziseduze, ukuba kuyimfuneko. Iirejista zeParish zingabhalisa ulwazi ngezizukulwana eziliqela zentsapho, zenze ukuba luncedo oluphangaleleyo lokuphanda umndeni waseMexico.
Iirekhodi ezininzi zecawa zaseMexico zifakwe kwi-Index ye-Vital Records Index evela kwi-FamilySearch.org. Le ncwadana yamahhala ekhompyutheni ekhompyutheni ye-intanethi, malunga ne-1.9 yezigidi zokuzalwa kunye ne-rekodi yama-300,000 yaseMexico, uludwe oluthile lwamarekhodi ezibalulekileyo ehlanganisa iminyaka ye-1659 ukuya ku-1905. Iinkcukacha ezongezelelweyo zokubhaptizwa kweMexico, imitshato kunye nokungcwaba kwiindawo ezikhethiweyo kunye namaxesha atholakala Ukukhangela kweeNkcukacha zeeNtsapho, kunye neirekhodi zamaKatolika ezikhethiweyo.
I-Library History yamabhankane ineengxelo ezininzi zeeCawa zaseMexico ngaphambi kowe-1930 ezikhoyo kwi-microfilm.
Khangela iNcwadi yeeNcwadi zoLwazi lweNtsapho phantsi kweedolophu apho iparadesi yakho yafunyanwa khona ukufunda iirekhodi zecawa zikhoyo. Ezi ziyakwazi ukuboleka kwaye zijongwe kwiziko lakho leMbali yoBomi .
Ukuba icawa erekhodiweyo oyifunayo ayifumanekanga kwiThala leMbali leNtsapho, uya kufuneka ubhale ngqo kwiparadesi. Bhala isicelo sakho ngesiSpanish, ukuba kunokwenzeka, kuquka iinkcukacha ezininzi ngokunokwenzeka malunga nomntu kunye neengxelo ozifunayo. Cela ikhophi yekhowudi yokuqala, kwaye uthumele umnikelo (malunga ne-$ 10.00 ngokuqhelekileyo usebenza) ukujonga ixesha lokuphanda kunye neikopi. Uninzi lwamaparishithi aseMexico alamkela imali yase-US ngendlela yemali okanye isheke lokukhangela.
19 Iindawo zokuPhando Umthi Wentsapho Yakho yamahhala
Izinyathelo ezili-10 zokufumana iSiza sakho seNtsapho kwi-Intanethi
Qulunqa iifayile zakho zodidi lokuzalwa
Indlela yokubhala iifoto zakho zeDVD
Ngubani Wafa Kwindlu Yam?
Ukulandelela i-American Indian Fathers
Imithetho Yentsapho - Inyaniso okanye Inyaniso?
Iingcebiso zokufumana IINKCUKACHA ZENGXELO ZamaHlathi e-Free kwi-FamilySearch
Imibuzo ye-Genealogy Questions-And Answers!
ILizwi loSuku - i-geijutsu
Ukubethelwa kweNtsholongwane eMelika
"Injengoyolo," "Oops elihle," kunye nobuCala
Abasetyhini kunye neTennis eTamerica: Iimbali zembali
Yintoni 'i-GHIN,' kwaye iGolfers isebenzisa njani?
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji eziphezulu zamaKatolika
Yintoni iDrysuit? Usebenza njani uDrysuits Work?
Iingcali zeSayensi zeSikolo zeBakala
Iingcamango Zemihla ngemihla yabasetyhini
Kuphi ukufumana iicuba kwi-7th Avenue eYbor City, eTampa
Inkcazo kunye nemizekelo ye-Adverb (ial)